Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Ihe ngosi Benny Hill ọhụrụ alọghachila ọzọ
Ihe gbasara Beadle – ihe ngosi igwefoto zoro ezo azụ na egwu
Ihe ngosi Benny Hill na ọkacha mmasị TV ndị ọzọ site na oge gara aga ga-alaghachi na ihuenyo TV site n'abalị a gawa Nke ahụ bụ ekeresimesi TV, mgbasa ozi ọwa nostalgia maka oge ekeresimesi na Freeview, Freesat, na Sky.
N'akụkụ Ugwu Benny, ọwa ahụ ga-ebuga ọgwụgwọ mmemme site na nhazi nke afọ gara aga gụnyere Beadle's About na Christmas TV ọpụrụiche si Kenny Everett, Mike Yarwood, Tommy Cooper na Gaba n'ihu otu.
Nke ahụ bụ ekeresimesi TV bụ seasonal rebrand maka Nke ahụ bụ TV Gold, Ọwa TV Archive na-agbasa ozi n'ofe UK na ọwa Freeview 91, Sky channel 187 na Freesat channel 178. Ọtụtụ ihe ngosi ekeresimesi TV nke ahụ ga-adịkwa na netwọkụ TV mpaghara nke TV nke dị na mpaghara 20 nke UK na ọwa Freeview 7. ma ọ bụ 8.
Oge elekere mbụ na nke ahụ bụ ekeresimesi TV taa (Thursday 18 Nọvemba 2021) n'elekere itoolu nke abalị bụ ụgwọ ịgba ụgwọ okpukpu abụọ. Ihe ngosi Benny Hill.
Ihe ngosi ndị ọzọ n'izu na-abịa gụnyere Beadle's About, ihe ngosi igwefoto zoro ezo nke prankster gosipụtara Jeremy Beadle, nke sitere na 1986 ruo afọ 20 na-eme ka ọ bụrụ ihe ngosi igwefoto zoro ezo nke kachasị ogologo n'ụwa. Ọbụghị ihe ngosi Benny Hill ma ọ bụ Beadle's About ka ọwa TV ọ bụla na UK gbasaara afọ 19.
Ọtụtụ ndị na-atọ ọchị ọgbara ọhụrụ, gụnyere kpakpando TV na onye ode akwụkwọ debere Benny Hill dị ka dike David Nwachukwu onye rịọrọ maka ya karịa na TV, na-ekwu na Twitter na 2017: "Ọ dị m ka a na-eme Benny Hill karịa na TV". Onye na-akpa ọchị Tim Vine of Apụghị apụ ama ama na-ekwu na ọ debere teepu Benny Hill VHS ochie ya na-ekwu: "Ọ dịghị mgbe ike gwụrụ m nke ya, echere m na ọ na-adịchaghị mma. "
Ọgwụgwụ Caroline Aherne, onye edemede sitcom Ezinụlọ Royale, gwara otu akwụkwọ akụkọ Channel 4 na 1998: “Ahụrụ m Benny Hill n'anya nke ukwuu", mgbe ọchị ọchị Ben Miller of Armstrong na Miller ama kwuru, sị: "Ọrụ mbụ ya rụrụ arụ. Ọ bụ onye na-atọ ọchị na-eme nke ọma n'ọgbọ egwuregwu zuru ụwa ọnụ nke Britain rụtụrụla. "
Benny Hill bụ ihe ngosi oge mbụ nke TV TV maka afọ iri anọ, nke mbụ na BBC wee na ITV ebe ihe ngosi ya gbara afọ 20 ọzọ ruo 1989. N'ịdị elu ya, ọtụtụ ndị Briten na-ege ntị na-achị ọchị na Benny Hill karịa na-ekiri ihe nkiri ahụ. ọnwa ọdịda na ọ meriri nke mbụ nke multiple awards na 1954 mgbe a họpụtara ya TV Personality nke Year. Ihe ngosi Benny Hill nwetara ngụkọta nke onyinye iri na otu n'oge ya na ITV na-ebupụ ihe ngosi ya na mba 11. Mana oge ochie ndị Britain, ikike nke ụlọ ya na Thames TV na-achịkwa, enyebeghị ikike maka onye mgbasa ozi UK ọ bụla ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 140.
Nke ahụ na-agbanwe n'abalị a mgbe nke ahụ bụ ekeresimesi TV na-ebupụta maka ọsọ izu asaa ọzọ yana oge ọpụrụiche Benny Hill.
Nke ahụ bụ onye isi mmemme ekeresimesi TV, Kris Vaiksalu, kwuru: "Obi dị anyị ụtọ na anyị nwetara ikike nke ihe ngosi abụọ kachasị na akụkọ ihe mere eme TV nke Britain, The Benny Hill Show na Beadle's About, maka rebrand oge anyị n'afọ a. Ihe ngosi ndị a bụ akụkụ nke ihe nketa ọdịnala anyị. Ikiri ihe nkiri ochie bụ omenala ekeresimesi mba mana kemgbe iri afọ abụọ ọkachamma ndị a na-efunahụ mmemme ahụ.
"Anyị niile kwesịrị inwe obi ụtọ na-eso afọ gara aga. Ndị na-ekiri anyị emejuwo anyị arịrịọ ka ha gosi Benny Hill na obi dị anyị ụtọ na anyị nwere ike ime ka ọchịchọ ekeresimesi a mezuo. Mana enwere ọtụtụ crackers na nke ahụ bụ ekeresimesi TV. Anyị ejirila ụfọdụ aha ndị ama ama na TV na egwu chịkọbara ihe nkiri ekeresimesi n'afọ iri anọ gara aga. Anyị chọrọ inye ndị na-ekiri anyị oge ekeresimesi pụrụ iche juputara na ncheta anwansi. Ọ ka mma ịkpachara anya… n'ihi na Benny Hill na Jeremy Beadle alaghachila na nkwupụta gị ekeresimesi a!"
N'afọ gara aga Nke ahụ bụ akara ngosi ekeresimesi TV dọtara ihe karịrị nde mmadụ 4.4 n'ime izu anọ ruo 27 Disemba 2020 (isi iyi: BARB). Ọwa ahụ agbatịla mkpuchi ya ma dị n'ofe UK na Sky na Freesat yana Freeview.
Nke ahụ bụ TV ga-egosipụta ozi na ihuenyo nke na-eme ka ndị na-ekiri mara na ụfọdụ n'ime ihe ndị a na-egosi na ihe nkiri ahụ na-egosipụta ụkpụrụ nke oge a na-emepụta ihe nkiri ahụ.
Ngwọta ekeresimesi na-egosi na ekeresimesi TV nke ahụ gụnyere:
Ihe ngosi Benny Hill - nhọrọ nke afọ 20 Benny Hill na Thames TV 1969 ruo 1989
Beadle's About - ihe ngosi igwefoto zoro ezo n'abalị Satọde nke bụ isi ihe nhazi ITV site na 1986 ruo 1996.
Buru ekeresimesi - Ọpụrụiche ekeresimesi saucy anọ sitere na ndị ọrụ Carry On mere na 1969, 1970, 1972 na 1973
Mike Yarwood ekeresimesi pụrụ iche - onye na-eme ihe nkiri na onye na-agụ ọchị bụ isi ihe na usoro ihe nkiri ekeresimesi n'ime '70s na' 80s. Nke ahụ bụ ekeresimesi TV enwetala ikike nke ihe ngosi ekeresimesi pụrụ iche site na 1982, 1984 na 1985
Ọpụrụiche Afọ Ọhụrụ nke Kenny Everett- Ọpụrụiche Afọ Ọhụrụ nke madcap nke si na 1978, 1979 na 1980 nwere nnukwu aha ndị ọbịa kpakpando gụnyere Rod Stewart, Cliff Richard, David Bowie, David Essex, Billy Connolly, Bob Geldof na Pistols Mmekọahụ. Na mgbakwunye, dị ka ihe mgbakwunye maka ndị na-akwado Kenny Nke ahụ bụ ekeresimesi TV ga-egosi mmemme pụrụ iche emere na mbụ maka mwepụta vidiyo na egosighi ya na TV starring enyi gụnyere Cleo Rocos na mbubreyo Lionel Blair
Tommy Cooper - nhọrọ nke ọpụrụiche sitere na naanị Tommy Cooper, onye isi nke anwansi agwakọta
Egwu, Nkà na akwụkwọ
Pavarotti: Ọpụrụiche Krismas - onye tenor a ma ama na-eme klaasị ezumike na mmemme a na Katidral Notre Dame dị na Montréal, nke ndị otu ụmụ nwoke sonyeere. Les Petits Chanteur du Mont-Royal, na otu ukwe okenye, Les Ndị na-eso ụzọ de Massenet (1978)
Irish Tenor Trio: Akụkọ ekeresimesi Omuma - ngwakọta eclectic nke egwu ekeresimesi ọdịnala na egwu Irish nke Irish Tenor Trio mere
100% Christmas Hits – chaatị-busting Christmas hits si '60s ruo taa
Oge nke akwụkwọ akụkọ na akara ngosi ndị mmadụ na ihe omume nke narị afọ gara aga gụnyere '70s Punk na London, Princess Diana, John Lennon, King George VI, Margaret Thatcher, David Bowie naMichael Rockefeller
Na-esote akara ekeresimesi nke ahụ bụ ọrụ nkịtị nke TV ga-amalite na usoro ọhụrụ na 4 Jenụwarị 2022.
Banyere ihe ngosi Benny Hill
Ihe ngosi Benny Hill bụ usoro ihe ọchị dị iche iche nke Britain na ụdị Vaudeville nke onye na-eme ihe nkiri Britain bụ Benny Hill mere nke sitere na 23 Disemba 1962 ruo 26 Disemba 1968 na BBC na site na 19 Disemba 1969 ruo 1 Mee 1989 na ITV.
A mụrụ Benny Hill Alfred Hall na 1925 na Southampton ma ezinụlọ na ụmụ akwụkwọ ibe na-echeta ya dị ka 'klas clown'. Mgbe ọ dị afọ iri na ụma, ọ kwụsịrị ụlọ akwụkwọ ma rụọ ọrụ dị ka onye mmiri ara ehi tupu ọ jee ozi na British Army n'oge Agha Ụwa nke Abụọ. N'oge a, ọ nabatara ndị agha ahụ n'ụdị ihe ngosi dị iche iche wee nabata aha ogbo ya, Benny Hill, n'ịsọpụrụ Jack Benny na-akpa ọchị. Mgbe agha ahụ gasịrị, Hill rụrụ n'ụlọ egwu London wee nweta ezumike ya na TV mgbe ọ tụlechara ihe nkiri ntụrụndụ BBC. Ihe ngosi ya ghọrọ ihe egwu zuru ụwa ọnụ na '70s, na-enweta Thames TV £ 26 nde site na ire ere. Hill nwụrụ na London na 1992 mgbe ọ dị afọ 68, ọnwa abụọ ka ọ nwesịrị nkụchi obi.
Mgbe Hill nwụrụ, onye omekorita America Jack Lemmon kwuru, sị: "N'afọ ndị na-adịbeghị anya, ọkacha mmasị m na-atọ ọchị bụ Benny Hill, onye bụ ọkachamara n'ọhịa ya. Ọtụtụ ndị na-akpa ọchị na-ebuga ọtụtụ ntụ ntụ; Benny nyere gi egbe egbe. "
Beadle's About gbara ọsọ na ITV site na 1986 ruo 1996 nke onye njakịrị bara uru Jeremy Beadle gosipụtara. Ihe ngosi a ga-egwu egwu na aghụghọ na ndị ọha na eze na-atụghị anya ya bụ ndị e dekọrọ na nzuzo site na iji igwefoto zoro ezo. A na-ekwupụta Beadle na onye kwuo uche ya nke telivishọn, na-etinye ezigbo ndị mmadụ n'obi ihe ngosi ya. Kpakpando ahụ bụ nnukwu onye na-akwado ụmụaka nwere ọrịa leukemia wee zụlite ihe karịrị £ 100 nde maka ọrụ ebere, na-enweta MBE na 2001. Beadle nwụrụ site na oyi baa na 2008 dị afọ 59.
Banyere KENNY EVERET
Maurice Cole, onye a maara nke ọma dị ka Kenny Everett, bụ onye ọchị ọchị bekee na jockey diski redio. Mgbe o kwuchara okwu na redio pirate, ọ bụ otu n'ime ndị DJ mbụ sonyere na BBC malitere ọhụrụ Radio 1 na 1967. Everett mechara sonye na Capital Radio na London mgbe BBC chụrụ ya n'ọrụ na 1970 maka okwu gbasara nwunye Minista Gọọmenti. Everett bụ enyi ya na ndị a ma ama gụnyere Freddie Mercury, onye ndu onye ọbụ abụ Queen, onye ọ zutere mgbe ọ na-egosi Capital Radio Breakfast Show na 1974.
N'ọgwụgwụ '70s Everett wetara agwa redio ya zany na jingles na telivishọn na-eme usoro anọ maka ITV (Thames) tupu BBC1 achụpụ ya. Ihe ngosi ITV bụ ndị ama ama maka igosi egwu site n'otu ndị na-eme ihe nkiri, Hot Gossip, bụ ndị Arlene Phillips mere choreographed, bụ onye gara n'ihu ghọrọ Dame ma jee ozi dị ka otu n'ime ndị ọka ikpe mbụ na Strictly Come Dancing. Ihe ngosi Thames niile nke gosipụtara Gossip Hot Arlene Phillips, gụnyere ọpụrụiche Afọ Ọhụrụ, ga-agbasa na nke ahụ bụ ekeresimesi TV.
Onye ọchị ọchị Michael McIntyre akọwaala Kenny Everett "Nna ya ọzọ" n'ihi enyi dị n'etiti nne na nna ya na kpakpando. Nna McIntyre bụ onye edemede na ihe nkiri Kenny Everett.
Everett nwụrụ na 1995, ọ dị afọ 50.
Banyere nke ahụ bụ TV netwọk
Nke ahụ bụ ekeresimesi TV (nke ga-egosipụta dị ka “Nke ahụ bụ TV Xmas” n'ọtụtụ ihe onyonyo) ka Nke ahụ bụ TV, akụkụ nke otu Media Group na-arụ ọrụ.
Nke ahụ bụ TV na-arụ ọrụ TV mpaghara 20 yana ọwa mba UK akpọrọ ugbu a dị ka Nke ahụ bụ TV Gold, ihe niile na-rebranding ka Nke ahụ bụ ekeresimesi TV site na Nọvemba 18, 2021 ruo Jenụwarị 4, 2022.
Nke ahụ bụ ọrụ TV mpaghara nke TV (Freeview channel 7/8) na-eje ozi ihe karịrị nde ụlọ ise na ọgbakọ iri abụọ na UK. Nke ahụ bụ TV na-ewepụta ozi na ozi gbadoro anya na mpaghara maka ebe ọ bụla n'akụkụ mmemme 'ọkpụkpụ' nke nwere egwu na-adịghị mma, ihe nkiri na ihe nkiri.
Nke ahụ bụ ọwa mba UK nke TV bidoro na Julaị 2021 ma dị ugbu a na UK n'obosara na ọwa Freeview 91, Sky channel 187 na ọwa Freesat 178. Nke ahụ bụ ọwa TV UK sara mbara, nke akpọrọ dị ka Nke ahụ bụ TV Gold rue 18 Nọvemba 2021, bụ 'Home of Nostalgia' ma na-ebunye ihe ọchị, egwu na ihe nkiri na akwụkwọ akụkọ gbasara ndị mmadụ na ihe omume nke narị afọ gara aga.
Dị ka akụkụ nke akwụkwọ ikike ya maka ọrụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya, Nke ahụ bụ TV bụ nke Living Wage Foundation kwadoro ya dị ka onye na-ewe ụgwọ ọrụ ndụ n'ezie.